Boorsooyinka Qalabka Shiinaha Shiinaha - Jumlada & Iibsashada Qalabka Qalabka Qiime-dhimista - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Bacda qalabka
(1) Haddii aad heshay aaladda ugu habboon, waad ka boodi kartaa qaybtaan, kaliya dalbo boorsada aad jeceshahay oo ku raaxee boorsada qalabka guryaha cusub. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan wali garanayn midka aad dooranaysid, markaa waxaan ku siinayaa talooyin kaa caawinaya inaad go'aan gaarto. Kahor iibsiga kiishka qalabka guryaha, waxaad u baahan tahay inaad ka fiirsato waxyaabaha qaarkood. (2) Naqshadda furitaanka: afkaaga fur, afkaaga fur, ama si kastaba ha noqotee, tani aad ayey muhiim u tahay. Bacaha qalabka badankood waxay leeyihiin. Sida aad arki karto, dhammaan qalabka ku jira liistadayada boorsooyinka qalabka guryaha ugu fiican ayaa leh. Taasi waa sababta oo ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad keydiso qalab dheeri ah, waxaan kaliya u isticmaalaa qalabka korontada, laakiin sidoo k......